Talaalliin Taayifooyidii kan jalqabaa argame - BBC News Afaan Oromoo
Talaalliin Taayifooyidii kan jalqabaa argame
Talaalliin haaraan dhukkuuboota taayifooyidii gosa 10 keessaa sagal ittisuuf dandeessisu Dhaabbata Fayyaa Addunyaatiin dhiyaateera.
Oggeessoonni damee kanaa akka jedhanittis, qorichichis dhukubni taayifooyidii waggaatti du'a namoonni kuma 20 olii fi dhukkuubbii kanneen miliiyoona 22 tiif madda ta'e kanaaf fala ni ta'a.
Irra jireessan dhukkuba kanaan miidhamaa kan jiran ijoollee yoo ta'an, tallaalliin kunis warra kaan irra daa'imman irratti caalaa bu'a qabeessa ta'a.
Kana malees talaalichi dhukkuba taayifooyidii saffiisaan babal'atu kana balleessuuf illeen akka oluu danda'u abdii taasifameera.
Dhukkubni taayifooyidiis baakteeriyaa saalimoneelaa jedhamuun kan dadarbu yoo ta'u, mallattoon isaas:
Qaama gubaa yeroo dheeraaf turu
Fedhiin nyaataa hir'achuu
Namoota 100 keessaa tokko du'aaf geessisuu mala.
Dhukkuubni karaa bishaaniifi nyaata faalameetiin darbu kunis amala attatamaan dadrbuufi babalachuu qaba.
Naanooleen rakkina qulqulliinaafi dhiheesittii bishaan qulqullu qabanis, dhukkuba kanaaf caalaa kan saaxilamaniidha. Dhukkuubni taayifooyidii kunis biyyoota eeshiyaa kibbaafi biyyoo saaraan gadii keessaatti bal'inaan mudata.
Wayita ammaa kanattis dhukkuba kan ittisuuf talaalliiwwan lama kan ragaasifaman yoo ta'u, hanga ammaattis talaalliin daa'imman umuriinsaanii waggaa lamaan gadi ta'eef hayyamame hinturre.
Dursaan garee Dhaabbata Fayyaa Addunyaatti waa'ee dhimma talaallii kanaa itti dhiheenyaan hordofaa jiru kan ta'an profeesar Ilihaandiroo Kiraaviiyotoo 'yeroo jalqabaatiif talaallii bu'a qabeessa. arganneera jedhaniiru.
Gareen kunis daa'imman ji'a jaha guutaniif kan kennamu ta'uu ibsaniiru.
Profeesar Ilehaandiroon akka jedhanitti, sababii qorichoota gosa hedduu addunyaa kanarratti tamsa'aniin kan ka'ee baakteeriyaan taayifooyidii qorichaan walbaraa dhufuunsaatiif, argamuun talaalli kanaa bu'aa olaanaa qabaata jedhaniiru.
Ragaan yaalii kilinikii yunivarsitii Oksifordiitti taasifameetiin argamee barruullee medikaalii laanseet irratti maxxanfameera.
Qorannichaan namoonni 112 baakteeriyaa taayifooyidiitiin akka qabaman taasifamuun kan yaaliin gaggeefame yoo ta'u, %87 bu'aa qabeessa ta'ee argameera.
Yaalicha kan taasisan Profeesarri Poolaaridi BBC tti akka himanitti , 'argannoon kun kan jalqabaati' jedhaniiru.